As of Wed, 27 May, 2020 15:05
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका डिल्लीराम अधिकारी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियरका रूपमा प्रवेश गरेका हुन् । १६ वर्षअघि संस्थामा प्रवेश गरेका उनी यतिबेला सोही कम्पनी हाँक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । २०६५ मा वरिष्ठ इन्जिनियर, २०७० मा उप–प्रबन्धक र २०७५ वैशाख १६ देखि प्रबन्धक भई कम्पनीका विभिन्न निर्देशनालय र विभागको काम उनले गरिसकेका छन् । एक्सेस नेटवर्क, ट्रान्समिसन नेटवर्क, वायरलेस ब्रोडब्यान्ड एक्सेस, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ब्याकबोन ट्रान्समिसन क्षेत्रका साथै कम्पनीको सह–प्रवक्ता र नोडल अधिकृतको समेत उनीसँग अनुभव छ । इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा विशिष्ट श्रेणीमा एमएससी गरेका उनी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा विशिष्ट श्रेणीमा बीई हुन् । सरकारको २०७५ पुस १९ गतेको निर्णयबमोजिम तीन वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त भएका हुन् । कार्यभार सम्हालेको झन्डै तीन महिना बितिसकेको अवस्थामा कम्पनीका योजना, बजारीकरण र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सरु ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल टेलिकममा सातौँ तहबाट प्रवेश गरेर अहिले कम्पनीको सर्वाेच्च पदमा पुग्नुभएको छ । सहकर्मी र केही वरिष्ठहरूभन्दा अगाडि नै नेतृत्व तहमा पुग्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
नेपाल टेलिकममा प्रवेश गरेपछि कम्पनीको नेतृत्वसम्म पुग्ने इन्छा जुनसुकै इन्जिनियरको पनि हुन्छ । त्यस्तै मैले पनि सेवामा प्रवेश गरेदेखि नेतृत्वमा पुग्ने र कम्पनी हाँक्ने कल्पना गरेको थिएँ । यति चाँडै कम्पनी नेतृत्वमा पुग्छु होला भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ । प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा रहेर गर्ने भनेको रणनीतिक निर्णयहरू नै हो । कम्पनीलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन सर्ट टर्म र लङ टर्म निर्णयहरूमा विशेष चनाखो हुनुपर्छ । जुन कुरा कम्पनीलाई समयसापेक्ष चाहिएको छ त्यो कुरा उचित ढंगबाट निर्णय गर्न सकियो भने कम्पनी अगाडि बढ्छ । टेलिकम भनेको प्रविधिको परिवर्तन दिनदिनै हुने क्षेत्र हो । निर्णय ढिला भयो भने प्रतिस्पर्धी बजारमा कम्पनीलाई अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । मैले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी लिएपछि निर्णय प्रक्रिया एकदमै छिटोछिटो भएको छ । म तुलनात्मक रूपमा नयाँ कुरामा अलि चासो दिने व्यक्ति हुँ । कलेजमा पनि पढाउँथें, त्यसले पनि मलाई थप अध्ययनशील बनाउन सहयोग ग-यो । प्राविधिक रूपमा राम्रो ज्ञान छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस विभागमा रहँदा पनि धेरै विदेशी कम्पनीसँग काम गर्ने मौका पाएकाले विश्वको बिजनेस ट्रेन्ड कता गएको छ भन्ने कुरामा निर्णय लिन अप्ठेरो परेको छैन । विगतका प्रबन्ध निर्देशकबाट पनि निर्णय त हुन्थे, तर म आएपछि अझ छिटो काम भएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
त्यस्तो के निर्णय गर्नुभयो, जसले विगतभन्दा फरक तरिकाले नेपाल टेलिकमलाई अगाडि बढाउँदै हुुनुहुन्छ ?
निकै लामो समयदेखि फोरजी आयोजना पेन्डिङमा थियो । सानातिना आयोजना पनि तीन–चार महिना लाग्ने परिपाटी कम्पनीमा थियो । जब हामीले मन्त्रालयबाट पत्र पायौं तब एक महिनाभित्रै फोरजीको सम्झौता गर्ने चरणमा पुग्यौँ । टेलिकमको इतिहासमा त्यति छिटो निर्णय कुनै पनि आयोजनामा भएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पनि अप्टिकल फाइबर बिच्छयाउने आयोजना टेन्डर भएको साउनको अन्तिममा, फागुनमै हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ । सामान्यतया नेपाल टेलिकमले एउटा टेन्डर भएर सम्झौता हुने समय भनेको नौ महिनादेखि १ वर्षको समय हुथ्यो । त्योभन्दा छिटो भएको छ । त्यसैगरी ४ लाख लाइनको एफटीटीएच सेवा विस्तार गर्न भदौमा टेन्डर गरिएको सम्झौता भइसकेको छ । गुणस्तर सुधार गर्न सोलार पावर थप्ने, ब्याक्ट्री, -याक्ट्रिफायर किन्ने काम पनि स्याडुयलभन्दा निकै छिटो अगाडि बढेको छ । बजारमा हामी जति छिटो जान सक्यौं, सेवाग्राहीले हाम्रो सेवा त्यति नै छिटो लिन्छन् । हरेक निर्णय ढिला गर्नु भनेको हाम्रो आम्दानी गुमाउनु, बजारमा ढिला जानु, जनताको अगाडि काम नदेखिनु हो । त्यसैले निर्णय प्रक्रिया भनेको छिटो हुनुपर्छ । कम्पनीलाई समयसापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउन कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया रोक्नु हुन्न, यसले गर्दा कम्पनीलाई नै घाटा हुन्छ र प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ भन्नेमा म चनाखो छु । प्रविधि क्षेत्रमा निर्णय प्रक्रिया ढिला गरिनु हुँदैन ।
पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले नयाँ–नयाँ स्किमहरू ल्याइरहेको छ, सबै स्किम डेटामै केन्द्रित देखिन्छ । के अब डेटामै फोकस हुने रणनीति हो ?
नेपालमा स्मार्टफोनको पहुँच राम्रो छ । स्मार्ट एप्लिकेसनहरू मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका एप्लिकेसनहरू स्मार्टफोनमा आउने हुनाले डेटाको माग बढी हुन्छ । ग्राहकलाई अहिले भ्वाइसमा भन्दा पनि डेटामा सधैं कनेक्टेड रहिरहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यो माग पूरा गर्न हामीले नेटवर्कको स्तरोन्नति पनि गरेका छौँ । गएको साउनयता हेर्ने हो भने डेटामा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो तीन महिनामा हेर्ने हो भने भ्वाइस कल २० प्रतिशतले बढेको छ । डेटाको माग बढेकाले हामीले प्याकेज ल्याएका हौँ । डेटाको प्याकेज थोरै डेटा प्रयोगकर्तादेखि धेरै आवश्यक हुने, राती प्रयोग गर्ने, विभिन्न समयलाई लक्षित गरी सेवा–व्यवसाय गर्नेलाई ध्यानमा राखी प्याकेज ल्याएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य नै डेटाको बिजनेस बढाउने हो । ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्न पनि डेटा नै चाहिन्छ । विद्यार्थी, शिक्षक, उद्यमी, व्यवसायीदेखि सबै प्रकारका ग्राहक छन् । हरेक वर्ग र क्षेत्रलाई डेटा सेवाको आवश्यकता छ । त्यसैले कम्पनीको फोकस पनि डेटा सेवामै गएको हो ।
अब भ्वाइस सेवा निःशुल्क गर्ने बेला भएन ?
अहिले पनि आम्दानीको ठूलो हिस्सा भ्वाइसबाट प्राप्त भएको छ । डेटाको आम्दानी बढ्दो क्रममा छ । निःशुल्क गर्न सकेका देशहरूले पनि छिटो प्रविधिलाई आत्मसात् गरे, प्रविधिमा फड्को मारे । हामी पनि केही समयपछि त्यो अवस्थामा पुग्छौैं । आउने दुई वर्षमा नेपालमा भ्वाइस सेवा केही मात्रामा निःशुल्क गर्न सकिएला भन्ने लागेको छ । निःशुल्क दिनासाथ नेटवर्कको लोड बढ्छ । लोड बढाउने काम पनि गर्नु हुँदैन । तत्काल नेटवर्कको स्तरोन्नति गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीसँग छैन । सबै सामान टेन्डरबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ । सम्भवतः फोरजीको रोलआउट गरेपछि नयाँ खालको स्किम लिएर आउने क्रममा छौँ । नेपालमा जनतालाई सस्तो सेवा, गुणस्तरीय सेवा र सबै ठाउँमा पहुँच पुग्ने सेवा दिने उद्देश्य हो । त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । सोसियो इकोनोमीलाई पनि यसैले सपोर्ट गर्छ । नेपाल सरकारका आफ्ना परियोजना सफल बनाउन पनि सूचना–प्रविधि नभई हुँदैन । अहिले हिमाल, पहाड, तराई जहाँ बस्ने नेपाली भए पनि पहिलो आधारभूत आवश्यकता नै सञ्चार हो । त्यही आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सोहीबमोजिम हाम्रा आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन् । आयोजनाको अन्तिम उद्देश्य नै आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्ने हो ।
तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनी अहिले विभिन्न विवादमा आइरहँदा पनि नेपाल टेलिकमले त्यसको लाभ लिन सकेन । त्यसो त टेलिकमलाई सरकारको सहयोग पनि पर्याप्त छ । यो बेलामा पनि कम्पनीले किन त्यसको लाभ लिन सकेको छैन अथवा भनौं कि कम्पनीको ग्रोथ किन देखिन सकिरहेको छैन ?
ग्रोथ नै नभएको होइन । २०६३ सालभन्दा अगाडि हामी एकाधिकारमा थियौं र त्यसपछि प्रतिस्पर्धी थपिँदाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो ग्रोथ २०६३ पछि नै बढी छ, तर पनि प्रतिस्पर्धीको तुलनामा कहिले कसको ग्रोथ बढी हुने र कहिले कसको कम हुने स्वाभाविक हो । बीचमा हामीले १ करोड जीएसएमको योजना ल्याउँदा हाम्रै ग्रोथ राम्रो थियो भने पछि त्यो प्रोजेक्ट स्याचुरेसनमा पुगेपछि अर्को कम्पनीले फाइदा उठायो । अहिले फेरि हाम्रो ग्रोथ सुरु भइसक्यो । कभरेज पनि बढेको छ । यही आवमै ४ सय बिटिएस बनाइसक्यौं र असारसम्म ६–७ सयवटा बिटिए बनाइसक्नेछौं । यसले कभरेज त बढाउँछ नै । म अस्ति तराईको भ्रमणमा जाँदा पनि निकै उत्साहजनक अवस्था देखेँ । हाम्रो सेवा लिन स्थानीय उत्साही छन् भने हामी पनि विस्तारको चरणमा छौं । विदेशबाट सामान ल्याउन केही समय लागेको मात्रै हो, हामी रोकिनेछैनौं । हामीलाई नेपाल सरकारको पनि साथ छ । जनताबाट पनि उत्तिकै साथ छ । हामी पनि निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरामा अब निर्धक्क भएर अगाडि बढ्दैछौं ।
गाउँगाउँमा सेवा विस्तार त भएको छ, तर त्यो क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तरको अवस्था भने निकै नाजुक छ । सहरी क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर केही राम्रै भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा फोन नलाग्ने, काटिनेदेखि इन्टरनेट नचल्नेसम्मका समस्या त सम्बोधन भएका छैनन् नि ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो प्रविधिको कुरा हो र प्रविधिमा जहाँ पनि समस्या आउन सक्छ । अस्ति नयाँ वर्षको दिन पाँच घण्टा फेसबुक बन्द भयो, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम बन्द भए । विश्वकै लिडिङ कम्पनीको त त्यो हालत छ । क्वालिटी नभएर त होइन, समस्या जता पनि आउँछ तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । हामीले त्यो सुरु पनि गरेका छौं । केही महिना पहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा मापन गर्दा हामी कमजोर थिएनौं र अहिले पनि कम छैनौं । नेपाली जनताको आकांक्षा नै अरूको तुलनामा हाम्रो सेवा गुणस्तरीय होस् भन्ने चाहना राख्नु हुन्छ । हामी त्यसमा सचेत छौं र उहाँहरूको चाहनाको सम्मान पनि गर्छौं । आगामी दिनमा पनि सेवाको गुणस्तर कायम राख्न प्रतिबद्ध छौं ।
गुणस्तरको कुरा गर्नुभयो । तर, विश्वमा फाइभजीको चर्चा धेरै भइरहेको छ । नेपाल टेलिकम आफैंले सुरु गरेको फोरजी सेवा अहिलेसम्म दुई सहरमा सीमित छ । यो सेवा कहिले देशभर पु-याइसक्नुहुन्छ ?
हामीले फोरजीलाई देशभर पु-याउने भनेर गत फेब्रुअरीमै सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । पछिल्लो अपडेटअनुसार करिब २ हजार स्थानमा टावर राख्ने काम भइरहेको छ । कोर उपकरण ल्याइसकेका छौं भने -यानको उपकरण आउने क्रममा छ । सम्झौताअनुसार १२० दिनमा उपकरण आउनुपर्ने हो । यो बीचमा साइटको प्लान गर्ने, सर्भे गर्ने काम भइरहेको छ । सातवटै प्रदेशमा सातैवटा टिममार्फत काम भइरहेको छ । यही द्रुत गति कायम रहने हो भने आगामी दसैंसम्म देशका सबै मुख्य सहरमा फोरजी सेवा विस्तार भइसक्ने हाम्रो अपेक्षा छ । एक वर्षभित्र देशव्यापी यो सेवा विस्तार गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको सेयर पब्लिकमा लगेर जनताको कम्पनी बनाउने घोषणा बारम्बार गर्दै आउनुभएको छ । यो घोषणा कार्यान्वयनको अवस्थाचाहिँ के छ ?
यो मूलतः सरकारको काम हो र यसमा मेरो कुनै भूमिका हुँदैन । मेरो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा केही बोल्ने कुरा पनि भएन र सरकारले आफ्नो घोषणाअनुसार काम गरिरहेको होला भन्ने लाग्छ ।
ल्यान्डलाइन टेलिफोनका विषयमा अब के गर्ने भनेर सोच्नुभएको छ ?
ल्यान्डलाइन कपर बेस्ड प्रविधिमा आधारित सेवा हो । यसो भएको हुनाले यो पुरानो पनि भइसक्यो । हामीले कतिपय यसका स्विचहरू आईएमएस प्रविधिमा रूपान्तरण गरिसक्यौं भने अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको हरेक ग्राहकलाई एफटिटिएच प्रविधिबाट सेवा दिने हो । यो वर्ष नै ४ लाख ग्राहकलाई हामीले एफटिटिएच प्रविधिबाट सेवा दिने सम्झौता गरिसकेका छौं । बिस्तारै यसलाई फाइबरमा रूपान्तरण गर्ने र फाइबारबाटै हामी इन्टरनेट र भ्वाइससँगै टेलिभिजन सर्भिस दिने योजनामा छौं ।
फोरजी विस्तारसँगै अब फाइभजीका विषयमा पनि सोच्ने बेला भएन र ?
फाइभजी अहिलेसम्म म्याचुअर्ड भइसकेको छैन । कोरियाले दुई हप्ताअघि सार्वजनिक गरे पनि यो कमर्सियल्ली अगाडि बढेको छैन । यसको प्राविधिक पक्ष निकै महŒवपूर्ण छ । कुनै पनि सिस्टम सञ्चालनका लागि इकोसिस्टम हुनुपर्छ । सर्भिस प्रोभाइडरले दिएर मात्र हुँदैन, डिभाइस पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । मूलतः यो कन्जुमरका लागि नभई इन्डस्ट्रियल उद्देश्यका लागि हो । यसका लागि नीति पनि बन्नुप-यो र स्पेक्ट्रम पनि सोहीअनुसार एलोकेट हुनुप-यो । तर, पूर्वाधारका न्यूनतम आधारहरू तयार भने राखिरहनुपर्छ । त्यसमा हामी तयार छौं । हामीसँग फोरजीको डिभाइस नै ५० प्रतिशतमात्र छ भने फाइभजीको त एउटै डिभाइस छैन होला । फाइभजीमा जान पनि फोरजीको आधार त बनाउनैप-यो । हरेक पछिल्लो र यसअघिको प्रविधि लगभग १० वर्ष सँगसँगै गइरहेको छ । टुजी र थ्रिजी तथा थ्रिजी र फोरजी सँगसँगै चलिरहेको थियो भने २०२५–०२६ सम्म त फोरजी चलिरहन्छ । जीएसमको प्रतिवेदनमै २०२५ सम्म विश्वको १४ प्रतिशतले फाइभजी प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । विश्वका विभिन्न अध्ययनले पनि फोरजी तत्काल फेजआउट नहुने देखिएकाले हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।
नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा कस्तो खाले प्रविधि पर्ने गरेको छ ?
नेपालको मार्केट हेर्ने हो भने अहिले उपभोक्ताको रोजाइमा वायरलेस प्रविधिको हाई स्पिड इन्टरनेट पर्ने गरेको छ । एप्लिकेसन बेस्ड अर्थात् स्मार्ट फोन लिएपछि सबै काम त्यसैबाट होस् भन्ने चाहना उपभोक्तामा हुने गरेको छ । मोबाइलबाटै क्यूआर कोड क्यान गरेर पेमेन्ट गर्ने प्रविधिचाहिँ नेपालमा सुरु भइसकेको छैन । त्यसो भएको हुनाले नेपाली मार्केटले खोजेको भर्चुअलाइजेसन र न्यू टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामी जानैपर्छ र हाम्रो तयारी त्यसैमा छ ।
टेलिकमको अबको लगानी केमा केन्द्रित हुनेछ ?
अहिलेचाहिँ हाम्रो फोकस भनेकै प्रविधि र प्रविधिलाई चाहिने पूर्वाधारमा हुनेछ । हाइड्रोमा पनि हामीले लगानी ग-यौं । अब भने राज्यले नै डिजिटल नेपालको नीति ल्याएकाले हामीले पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्छ । हामीले यसको परिकल्पना पूरा गर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछौं ।
तपाईंहरू आईटी कम्पनी खोल्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले किन रोकियो ?
पहिलो तयारी थियो तर विभिन्न कारणले पूरा हुन सकेन । हामी मुलुकको नीतिअनुसार प्रविधिको पूर्वाधारतर्फ लगानी गर्नुपर्ने र सेवाको सुधार पनि गर्नुपर्ने भएकाले पनि त्यतातर्फ लाग्न सकेका छैनौं ।
तपाईंमाथि टेलिकमको एमडी भएपछि गुटबन्दीमा लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
मेरो कुनै ग्रुप छैन । म सबैसँग समान रूपले व्यवहार गरिरहेको छु । यो आरोप मात्रै हो र संस्थाको मर्यादा कायम गरिरहेको छु । सबै युनियनबाट पनि सहयोग छ । सबै कर्मचारीको चासो पनि संस्थाको उन्नति नै हो र संस्था प्रोजेक्ट होलिडेबाट अघि बढोस् भन्ने थियो र त्यो काम अघि बढिसकेकाले उहाँहरूबाट सहयोग नै हुनेछ ।